Usoro a na-ejikarị ebi akwụkwọ na China-Blog-Book Printing China
Methodszọ ndị a na-ejikarị ebi akwụkwọ na China
Oge: 2020-11-20 Hits: 13
Maka ọtụtụ ụlọ obibi akwụkwọ na China, enwere ike kee usoro obibi akwụkwọ nke ederede na onyonyo na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe nkiri na mpempe akwụkwọ ozi, lithographic, intaglio, na efere perforated dịka ọdịdị nke efere ahụ si dị, a na-ejikwa ha dịka ebum n’uche. Teknụzụ mbipụta akwụkwọ izugbe ndị a na-agbanwe site na ịme anwansị gaa na dijitalụ, wee jikọọ na netwọk iji gbanwee ọdịdị ha.
Ka m lekwasị anya na ike nke nkenke nkenke technology na ya ngwa na electronic injinịa nyochaa ugbu a ọnọdụ nke dechapụ ebi akwụkwọ (lithographic) na ntinye ederede (usoro). N'izugbe, ọ nwere ike na-atụle na ink viscosity bụ dịtụ elu na mmeputakwa film ọkpụrụkpụ bụ dịtụ mkpa, na ezi akara reproducibility yiri ka ọ ka mma.
Dị ka ihe atụ kachasị ewu ewu banyere ibipụta akwụkwọ na China obibi akwụkwọ, enweela ikpe ebe ejiri agba agba nke akwụkwọ izu ụka na-ebipụta ya 700 ahịrị esenidụt. na-emekarị 175 ahịrị ji ebi akwụkwọ, mana m kpebiri na mberede iji 700 ahịrị maka ibi akwụkwọ. N'ezie, a ga-emeziwanye nkwupụta nke akụkụ dị mma. A na-ahụ ihe osise ndị a na-apụghị ịhụ anya site na ịlele site na enyo enyo. N'ihi na ọ bụ ntụpọ, ọ bụ ezie na mkpa akara obosara siri ike igosi, ọ ka nwere ike igosi ihe ruru 20μ. Otú ọ dị, nke a na-egosipụta naanị mbipụta e biri ebi. Mgbe ọ na-abịa ihe nlereanya mmeputakwa maka ngwa injinia elektrọnik, ihe ndị a chọrọ siri ike karịa. Nke a bụ tumadi n'ihi ezughi oke ink film ọkpụrụkpụ.
Na mgbakwunye, dị ka ihe atụ nke intaglio obibi akwụkwọ, ezi ederede na ezigbo shading na-ebipụta maka mgbochi adịgboroja nke ebuka, nchebe, etc. Ọ bụrụ na ị jiri iko dị ebube lee akụkụ a nke ihe oyiyi, ị nwere ike eleghị anya ịhụ mmeputakwa nke ahịrị ọma nke 10-20μ. Ikwu okwu n'ozuzu, jiri ya na mbipụta biiti, gravure ebi akwụkwọ nwere ike welie ọkpụrụkpụ nke ink fim, ya mere, ọ bara uru na ngwa nke injinịa eletrọniki.
Iji gravure dechapụ ebi akwụkwọ ebipụta LCD agba mirror
Nke a bụ ihe atụ nke iji gravure dechapụ ebi akwụkwọ na-ebipụta LCD gosipụtara enyo. Usoro obibi akwụkwọ nke etinyere ink na efere intaglio ma bufee ya na blanket silicon, mgbe ahụ, a na-ebufe ego niile na iko iko. N'oge mmepụta ihe, dị ka imewe nha, a na agba mirror na a akara obosara nke 40 ~ 50 e biri ebi ma tinye ya n'ahịa. Otú ọ dị, nke fọdụrụ bụ flatness nke elu nlereanya.
Dị ka usoro iji meziwanye flatness, eweputala usoro ibiputa. Nke a bụ nke izizi itinye ink ahụ n’elu blanketị ahụ, wepụ akụkụ ndị na-enweghị isi na efere enyemaka na-adịghị mma, ma mechaa nyefee ya n’elu efere iko nkịtị n’otu aka. Flatness nke ihe nlereanya na-adabere kpamkpam na ịdị n'otu na ire ụtọ nke ink dee oyi akwa ntekwasa na blanket. Ya mere, enwere ike kwuo ya ma e jiri ya tụnyere usoro obibi akwụkwọ gravure offset, usoro a na-elekwasị anya na ịdị mfe nke njikwa ire ụtọ.
Na Mbụ Page : Ihe omuma banyere akwukwo obibi
Next Page : Gịnị ihe banyere price nke katalọgụ ibi akwụkwọ china?